Miyaysan ku quus-qaadsho mudneyd? | KEYDMEDIA ENGLISH
Miyaysan ku quus-qaadsho mudneyd?
Tallaabadaan, waxa ay tusaale u tahay in mabda’, mowqif ku sugnaashiyaha, adkeysiga, sal-adegga, go’aanka, ballanta iyo wajihidda runtu, ay tusaalooyin toolmoon u yihiin, Siyaasadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – 11 Biliiod ka hor, 16, April 2021, waxa ay ahayd, habeen fiid ah, oo xiisad siyaasadeed iyo xasarado colaadeed aloosnaayeen, kadib markii saraakiil ku heyb ah Farmaajo, oo uu hoggaaminayay Gen; Biixi, duullaan ku qaadeen degaanka Shiirkole ee degmada Hodan, si ay u xiraan Talyihii Booliska Gobolka Banaadir, Saaqad Joon, oo ka hor yimid Muddo kordhintii 12-kii April.
Sida ku dhigan xasuusta Keydmedia Online, dullaankaas, waxaa hor istaagay, xildhibaanno, ay hor kacayeen, Mahad Maxamed Salaad, Cabdisaabir Nuur Shuuriye iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), kuwaas oo shanti sano ee la soo dhaafay, si adag kaga soo horjeeday rajiinka Farmaajo, isla-markaana u taagnaa difaaca dadka iyo degaanka ay matalaan.
Xildhibaannadaan, waxa ay si aan gambasho lahayn u sheegeen in Farmaajo, duullaan ku yahay xaafad ka tirsan degmada Hodan oo ay deggan yihiin dadka ay iyagu matalaan, isla-markaana ay diyaar u yihiin difaacooda, qiimo kasta haku kacdee, waxayna degenaasho ka sameysteen degaanka duullaanka lagu ahaa, taas oo sababtay, in indhaha caalamku ku soo jeesto xiisadda taagneed.
Marka ay halgankaas ku jireen Odawaa, Mahad iyo Saabir, waxaa iyaguna barbar socday, Ubax Tahliil Warsame, Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac, iyo Warsame Maxamed Xasan [Joodax] oo iyaguna Shiirkole matala, hayeeshee, la socday kooxda duullaanka ahayd, waxayna warbaahinta ka sheegeen in Xildhibaannada iyo Sarkaalka Shiirkole degay yihiin mooryaan qaran dumis ah.
Xildhibaannada hore, u-jeedkoodu, wuxuu ahaa, in ay waddo kasta u maraan, sidii ay kaga soo bixi lahaayeen shaqada loo igmaday ee ay dadka ku matalaan, halka kuwa danbe, yoolkoodu ahaa, qanacada Farmaajo, si uu ugu boobo kuraasta baarlamaanka 11-aad ee degaan doorashadoodu tahay Gaalkacyo, si ay dib ugu soo laabtaan Golaha Shacaka, taas oo ahayd riyo maalmeed.
Mahad, Saabir iyo Odawaa, waxa ay mar kale, si xarago leh, ku soo heleen kuraas Baarlamaan, iyaga oo garab ka helaya dadka ay matalaan, waxaana lagu abaal mariyay in ay mar kale, Shiirkole sii matalaan, halka, Ubax, Dhalac iyo Joodax, la soo dharbaaxyeeyay, loona diiday kuraastii ay ku fadhiyeen, waxaana lagu wargaliyay in ay Farmaajo kuraas weydiisyaan maadaama ay isaga matalaan.
Tallaabadaan, waxa ay tusaale u tahay in mabda’, mowqif ku sugnaashiyaha, adkeysiga, sal-adegga, go’aanka, ballanta iyo wajihidda runtu, ay tusaalooyin toolmoon u yihiin, Siyaasadda, isla-markaana waxa ay caddeyneysaa in kobo-qaadidda iyo hadba-geed fariisugu, aysan waxba ka galin masraxyada Siyaasadda, waana farqiga u dhaxeexa labada Koox ee kor u xusan.
Sidoo kale, waxaa xusid mudan in ay degaanka Shiirkole tageen Sanatarro ka tirsan Aqalka sare iyo Xildhibaanno Golaha Shacabka ah, Sida; Cabdi Dhuxulow [Dhagdheer] Geelle Yuusud [Dhagay], Xuseen Iidow, Maxamuud Beenebeene, Cabdullahi M. Nuur iyo kuwo kale, kuwaas oo si adag uga hor yimid duullaanka, intoodaba badan dib ayaa loo soo doortay.